Sheekh Shariif Oo LIX Qodob Kusoo Koobay Cadhadii Uu Ka Qaaday Safar Uu Ku Tegi Lahaa Kismaayo Oo DF U Diiday - Jigjiga Online
HomeSomalidaSheekh Shariif Oo LIX Qodob Kusoo Koobay Cadhadii Uu Ka Qaaday Safar Uu Ku Tegi Lahaa Kismaayo Oo DF U Diiday
Sheekh Shariif Oo LIX Qodob Kusoo Koobay Cadhadii Uu Ka Qaaday Safar Uu Ku Tegi Lahaa Kismaayo Oo DF U Diiday
Muqdisho (JigjigaOnline) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ka hadlay safarkii Kismaayo ee shalay laga baajiyay ayaa sheegay in uu sugayay dowladda in ay raaligelin ka bixiso.
Sheekh Shariif ayaa laga celiyay diyaarad uu u raaci rabay magaalada Kismaayo oo uu uga qeybgali lahaa xafladda caleemo saarka Axmed Madoobe oo ku guuleystay doorasho khilaaf adag sababtay.
Haddaba, Sheekh Shariif muxuu uga hadlay Shirkiisa Jaraa’id arrimo ay ka mid yihiin qodobbadan:
1- Xaqa safarka ee qof kasta u leeyahay inuu safro
Dowladda Federaalka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in guud ahaanba diyaaradihii aadayay Kismaayo la hakiyay, balse taas waxay saameysay Sheekh Shariif oo shalay laga celiyay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho.
“Waxaan aaminsanahay in qofkasta oo muwaadin Soomaali ah in uu xaq u leyahay in uu u safro meesha uu doono iyo goorta uu doono. Waxaan u arkaa nasiib daro in dowlad sharci lagu doortay ay sharcigii jebiso”, ayuu yiri Sheekh Shariif…
Wuxuu sheegay in uu cad yahay meesha ay arrintaas ka taagan yihiin, “waxba iskama badalin” ayuu sheegay.
“waxaan u arkeynay tacaddi iyo in la jebiyay dastuurka oo dowladdu si bareer ah oo ula kac ah u sameysay, Xaqna uma laha”,
“Shayga qariibka ah wuxuu yahay in ruux Mareykanka ka yimaaday iyo ruux Yurub ka yimid oo leh 30 sano soo joogay, in ay maalin walba sharciga garab maraan”, ayuu hadalka ku sii daray
Sheekh Shariif wuxuu u muuqday qof hadalladiisu ay kulul yihiin intii uu la hadlayay warbaahinta. Wuxuu ahaa shar saxaafadeed ee su’aalo la weydiin.
Wuxuu yiri: “Arrintaas mid la aqbali karo ma ahan. Ninkii iska fadhiyay ama ilmihiisa u shaqeysanayay ee marka dalka la isku hagaajiyay lagu yiri ku soo dhowaw waalagu doortay ee garbaha laga istaagay, manta lagama aqbalaayo inuu yiraahdo ‘garoonka kama bixi kartid’, waxaan rabaa warkeyga inuu caddaado”.
“Aniga garoonka waa la iga reebi karaan; laakiin hal shardi: Waa sharciga. Sharcigaa ii ogol inaan Kismaayo aado; sharcigaa ii ogol in aan Puntland aado; sharcigaa ii ogol in aan aado meel kasta oo Soomaaliya ah.
“Dowladda waxaan 24kii saac ee la soo dhaafay ka sugeynay in ay ka garaabaan khaladkooda. Khaladka aniga la iga galay waa mid qofkastoo muwaadin Soomaali ah laga galay.”
Balse dowladda Federaalka ayaa la sheegay in xayiraddii saarneyd Kismaayo ay sii adkeysay iyadoo la filayo in caleemo saarka Axmed Madoobe uu halkaas ka dhaco.
“Waxaan aad iyo aad uga xumahay go’aanka saaka la soo saaray ee reer Jubbaland lagu cunnaqabateeya. Waa dad Soomaaliyeed; xaq bay u leeyihiin in xilligey doonaan safraan”.
“Garoonka magaalada Muqdisho wuxuu xirnaa 15 sano markii maxkamadaha ay furayeen. Dowladdii Kumeelgaarka ahayd ee aan hoggaaminayay waxay ku guuleystaya in ugu yaraan terminaalka uu noqdo meel laga soo degi karo.”
“Garoonka intaas iga soo gashay haddii aniga la ii ogolaan waayo, cidda loo ogolaanayo bal ii sheega”.
2- Doorashada lagu murmay
Dowladda Soomaaliya ayaa meel adag ka istaagtay doorashada la isku khilaafay ee uu ku guuleystay Axmed Madoobe, taas oo sababtay in laba musharrax oo kale ay sheegtaan in ay ku guuleysteen xilka madaxweynaha Jubbaland.
Sheekh Shariif wuxuu tilmaamay in uusan dooneyn in uu dhexgalo “khilaafka u dhexeeya madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Farmaajo .”
Laakiin wuxuu yiri: “Markii doorashada ka dheceysay Puntland, yaa qabanqaabiyay – Ma Puntland baa mise dowladda dhexe? Yaa iiga jawaabi karo? Maxay ku kala duwan yihiin Puntland iyo Jubbaland? Labadaba sharcigaa u ogolaanayo in ay doorasho qabtaan”.
“Doorashada sidey u dhacday waalaga hadli karaa. Labada maamul laba doorasho bay qabanqaabiyeen, mid madaxweynuhu wuu ka qeybgalay – waa tii Puntland – midna wuu diiday”.
“Su’aasha labaad waxay tahay – haddii dowladdu madmadow ay ka qabto, habka ugu haboon ee loo xallin karay ma yahay midkan? Maxaa ka soo bixi kara tallaabooyiinka qaldan ee dowladdu ay qaadeyso”.
Hase yeeshee dowladda Federaalka ee Soomaaliya waxay sheegtay in “doorashada aysan u helin hannaan ay qeyb uga noqoto”, sida lagu xusay warsaxaafadeedyo horey u soo baxay.
Dhexdhexaadin ay Beesha Caalamka ka dhex sameysay dowladda iyo maamulka Jubbaland ayaana guuldaro ku dhammaaday.
Balse Sheekh Shariif wuxuu u arkaa dowladda ay dhankeeda aysan sharciga “ixtiraamin”.
“Sharcigii lagu doortay haddii ay ixtiraami waydo, macneheedu wuxuu yahay ‘dowlad ma jirto’. Inta jeer ee dowladdu garab martay sharcigana xisaab ma lahan”.
Sheekh Shariif oo ahaan jiray madixii midowgii Maxaakiimta wuxuu sheegay in dowladda ay ku “fashilantay” wax ka qabashada arrimaha amniga dalka.
“Ciidan ka mid ah kuwa qaranka ayaa shalay ay Al-shabaab soo weerareen oo ay baabi’iyeen, wax ka hadlayo miyaad aragteen”.
“Waxaa laga rabay amniga in ay sugto. Waxaan aaminsanahay in ay ku fashilantay. Magaalada oo dhan way kala xiran tahay, amni ma ah, ganacsi xor ahna ma jiro. Marka dadkaan yey u adeegayaan. Al-Shabaab wax kama qabtaan, waxayna maalin walba daba socdaan siyaasiyiinta”, ayuu yiri.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay wax ka qabatay “dhismaha ciidanka qaran, sidii ay mushaar ku heli lahaayeen iyo in xuquuqdooda kale ee aasaasiga ah la siiyo”.
Sidoo kale xafiisyada madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha ayaa horey u sheegay in “howlgallo Al-Shabaab ka dhan ah ay billaabi doonaan” kuwaas oo weli la eegayo xilliga ay billaaban doonaan.
“Haddii aan Shabaab lala dirireynin oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan Karin oo qof xor ah uusan jirin, waxa ka dhalan kara waad garan kartaan. Anaga ma rabno intaan iska aamusno in marka ay wax halaabaan aan indhaha taagno.”
4- Khilaafka dowladda iyo maamullada
Waxaa jiray khilaaf muddo soo jiitamayay oo u dhexeeyay dowladda Federaalka iyo maamul Goboleedyada, inkastoo Golihii iskaashiga ee maamullada uu u muuqdo inuu meesha ka baxay.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa sheegay: “Siyaasiyiinta, ha noqdeeno axsaab ama madax maamul goboleed, waad ogtihiin dhibaatada ay dowladda ku hayso”.
Qaar ka mid aaah madaxdii Golahii Maamul Goboleedyada, sida madaxweynayaasha Hirshabeelle iyo Galmudug ayaa la heshiiyay dowladda halka madaxweynihii Koonfur Galbeed uu meeshaba ka baxay.
Inkastoo Puntland uu isbedel ka dhacay, haddana waxaa weli muuqda in khilaafkii dowladda dhexe kala dhexeeyay inuu halkiisii ka sii socdo.
“Maamul goboleed dowladda xiriir la leh oo xor ah ma jiro; mise waa beentey”, ayuu weydiiyay Sheekh Shariif, dadkii uu la hadlayay.
“Maamul Goboleed xor ah oo go’aankiisa qaadan karo oo dadkiisa matala oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro. Jubbaland isma hayaan; Puntland-na isma hayaan. Galmudug-na waxa ka socda waan ognahay. Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed waxa ka socdo waan ognahay. Marka yaaloo shaqeynayaan oo dowladda yey u shaqeyneysaa”, ayuu hadalka ku sii daray.
“Aniga waxaa la aaminsan yahay inaan u jilcanahay oo aan heshiis la galay. Ma ahan sidaa. Aniga dowladda waxaan uga aamusnaa waa u turid sababtoo ah waqti ayaa iga galay, saaxiibbo qaali ah ayaan ku waayay, kuwaa ku dhaawacmay, kuwana xoolohooda ayey ku waayeen. In ay degdeg iyo si khalad ah ay wax u hallaabaan marabo”.
“Ok, afarteeda sano haloo dhaafo, laakiin hadeysanba ogolaan Karin waxyaabaha yaryar ee xuquuqaha aasaasiga ah ee dadku ay leeyihiin, sideen doorasho u wadagali karnaa”.
5- Sharciga in loo siman yahay
“Adiga siyaasi ayaa tahay, sharcigaanna kuu ogolaaday in aad na hoggaamiso. Kanna sharcigaa u ogolaaday in uu mucaarad ahaado oo sidaas xisbi ku dhisto,” ayuu yiri Sheekh Shariif uu hadalkiisa u muuqdo inuu ku waday khilaafka ka dhexeeya dowladda iyo qaar ka mid ah axsaabta mucaaradka ah.
Hoggaamiyihii hore ee Midowgii Maxaakiimta Islaamka ayaa carabkiisa ku adkeeyay in dowladda aysan raacin sharciga iyo dastuurka.
Wuxuu yiri: “Dowladdu waxay ahayd in dastuurka ay ilaaliso iyo nidhaanka geeddi socodka dowladnimadana ay hoggaamiso ayadoo raaceysa sharciga”.
“Ma og tihiin dowladda iyo sharciga in loo siman yahay? Waxaan ula jeedaan dowladda iyo muwaadiniinta sharciga way u siman yihiin – dowladdu wuxuu siinayaa awood iyo waajib, anigana wuxuu isiinayaa awood iyo waajib muwaadin ahaan”.
“Garoonkaas haddii Farmaajo uu ka bixi karo oo xaq uu u leeyahay, anna waan ka bixi karaa. Haddii sharciga aniga uu iidiido, isagana wuu u diidayaa. Marka waxa la isku hayo waa sharci ee afarta sano ee madaxweynaha kama hadlayno, waan ogol nahay”, ayuu hadalka ku sii daray.
“Haddey ka leexdaan sharciga maxaa dhici kara? Waxaa dhici kara in dowladnimada ay burburto. Sababtoo ah, dalkaan weli dib u heshiisiin dhab ah iyo wax la isku og yahay oo adag oo dowladnimada Soomaaliya aasaas u noqda ma jiraan”.
Dowladda Soomaaliya weli wax jawaab ah kama aysan soo saarin eedaha culus ee uu u jeediyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka hadlay magaalada Muqdisho.
Hadallada kulul ee uu u sheegay waxaa ka mid ah: “Dowladda marka waxaan ku dhahayaa ‘ka jooga meesha aad ku socotaan. Sharciga aad hareer mareysaan ka jooga. Waxa la diinku ixtiraamayo waa sharci”.
Wuxuu sidoo kale dalab u jeediyay Soomaalida qaar wuxuuna yiri: “Dowladnimadaan waxay ku socotaa meel qaldan. Waxaa lagama maarmaan ah in dadka Soomaaliya isu yimaadaan oo ay talo yeeshaan. Waxaan arkaa dowladnimadii Soomaaliya oo dhumeysa”.
“Waxaan rabaa in warkeygana caddaado – dowladdu waxay ku socotaa hannaan qaldan oo keenaayo in dowladda ay burburto. Kama aqbali karno”, ayuu u sheegay saxafiyiinta.
“Maxamed Cabduulaahi Farmaajo isagoo boorsadiisa iyo suutkiisa wato, anigaa magacaabay. Marka dalkaan wax ka galay oo dhaqaale ah ma jiraan. Isagaa ka faa’ideystay. Xasan Cali Khayre waa sidoo kale.
“Anaga dalka waxbaa naga galay mana ogolin inuu burburo. Waddada uu ku socdo way qaldan tahay, waxaan leenahay ‘jooji, meesha aad joogto ma dhaafi kartid, Soomaalina ha isu timaado”.
6- Isku wareejinta xilka madaxweynaha
Sheekh Shariif oo ahaa madaxweynihii howladdii kumeelgaarka ee 2009 illaa 2012-kii, wuxuu xilka ku wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud oo kaga guuleystay doorashadii ugu horeysay ee lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Wuxuu yiri: “Dowladda hadda jirta ee madaxweyne Farmaajo uu hoggaamiyo waxaa wax loogu dhiibay doorasho; waxaa loogu dhiibay dastuur waxa uu farayo. Madaxweyne Xasan Sheekh baa ka horreeyay. Isagoo awood leh oo ciidammadii haysta oo amkaaniyaad haysta, wuxuu ogolaaday in uu dhaho waa la iga guuleystay.”
“Taas waxaa aasaas u ah dastuurka oo nafaraya in afartii sanaba doorasho la qaban qaabiyo; ciddii ku guuleysata in lagu wareejiyo; lala shaqeeyo, lana caawiyo”, ayuu hadalka ku sii daray.
“Dowladdii Xasan Sheekh waxaa ka horeysay middeydii oo muddo afarta sano ka dib ku guuleysatay in ay doorasho halkan Muqdisho) ku qabato. Anigoo awoodi kara inaan dariikhyo kale maro; waala iga guuleystay waana aqbalay; madaxweyne Xasan Sheekh ayaana ku wareejiyay.
“Maxay waxaas oo dhan u dhacayeen? Haddii madaxweyne Farmaajo uu madaxnimada jecel yahay; Xasan Sheekh wuu jecel yahay; aniga waa jeclahay; kuwa kalena way jecel yihiin. Laakiin u jeedadu waxay tahay in la ilaaliyo sharciga iyo dastuurka”.
“Haddii aan yara kaftamo; aniga waxaan ahay nin wadaad ah oo jabhad ah oo aad ogtihiin xaalkiisa; Waa la iga filanayay in aan xukunka ku dhego. Markii aan doorashada qabanayay, talooyiin badan waxay ahaayeen ‘war waxaan dib isaga riix ee horey u soco’ waxaan dhahayay ‘maya ma sameynayo”.
AKHRISO: Dagaalladii Ay Itoobiya Iyo MASAR Wada Galeen & Xurgufta Cusub We Hadda Taagan